China Multi Shuttle umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
1.I-Multi ShuttlesI-ystem iqulathe irakhi enamanqanaba amaninzi, ishuttle, i-conveyor phambi kwerakhi, isiphakamisi, isikhululo sokuchola kunye nesoftware.Inqanaba ngalinye le-conveyor lisebenzisana ne-shuttle kwaye enye i-shuttle inokwabiwa kwinqanaba elinye kuphela okanye ngaphezulu.Ukunyuswa ekupheleni kwendlela kuzisa iimpahla kumhambisi.
2.IiShuttle ezininzi, njengokoisixhobo sokugcina esisebenzayo kwimigqomo kunye neebhokisiugcino,lolona khetho lulungileyo lokuchola iodolo kunye nokuzaliswa kwezinto ezincinci, kananjalounakoisetyenziswe kugcino lwexeshana ukuxhasa imisebenzi yomgca wemveliso.Yonaivumelangokukhawuleza kwaye ngokuchanekileyo uhlobo kwaye ukhethe, ukonga indawo kunye nokuguquguquka.
3. Iimpahla zihanjiswaukucholaisitishingokusebenzisa izixhobo zokuhambisaby Ukuhlela ngokukhawuleza nangokuchanekileyo, ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle.IiShuttle ezininzisinkqubois ilungele ngakumbi ishishini le-E-commerce kunye neshishini leMoto.
1 Automatic single inbound Ukwamkelwa komyalelo ovela kwikhompyuter yenginginya, ngokuzenzekelayo izisa ibhokisi kwindawo yebuffer yangaphakathi ukuya kwindawo echaziweyo yokugcina.
2 Okuzenzekelayo okuphumayo okukodwa Ukwamkela umyalelo ovela kwikhompyuter yenginginya, ihambisa ibhokisi kwindawo ekhankanyiweyo ukuya kwisiphelo esiphumayo.
3 Ukutshintsha okuzenzekelayo Ukwamkela imiyalelo evela kwikhompyuter yenginginya, ihambisa ibhokisi ukusuka kwindawo ethile ukuya kwenye.
4 Ukutshaja kwi-intanethi Amanqanaba amaninzi okulawula umda wamandla, ukuzigweba kunye nokuzihlawulela kumgca.
5 Umsebenzi wokuzifundela Ukulinganisa ngokuzenzekelayo, chonga idatha ye-racking kunye ne-pallet, kwaye ufake iiparamitha ngokuzimeleyo
6 Umsebenzi okude Iyakwazi ukuhlaziya kunye nokukhuphela inkqubo ukude (Kwi-Wi-Fi Network)
7 esweni inkqubo Ijonga idatha yenkqubo ngexesha lokwenyani kunye ne-alam ephakanyiswe kwisandi kunye nokukhanya kwimeko engaqhelekanga.
8 Ukujonga ukubetha kwentliziyo Nxibelelana ukubamba inkqubo yolawulo lwekhompyuter ngexesha lokwenyani ngokujonga ukubetha kwentliziyo, ukubeka iliso kwi-intanethi
9 Ukuyeka ngokuNgxamisekileyo Uphawu olungxamisekileyo luthunyelwe ukude ngexesha likaxakeka, kwaye i-shuttle iyama ngoko nangoko de kunyuswe imeko kaxakeka.
Iyakwazi ukuqinisekisa isixhobo okanye iimpahla ziyeka ngokukhuselekileyo ekuthotyweni okuphezulu xa isenza lo myalelo.
② Loluphi uhlobo lwempahla olulungele iNkqubo yeSine-way Multi Shuttle Storage ?
Uhlobo lwephakheji yempahla: Imigqomo, iikhathoni, iitoti kunye nokunye
Ubungakanani bempahla (mm): Ububanzi: 200-600mm;Ubunzulu: 200-800mm;Ukuphakama: 100-400mm
Ubunzima bempahla: <=35kg
Ubude bokusebenza <=15m
Ubume be-aluminium obulula.
Ukugcinwa okunzulu okukodwa okanye kabini.
Inqanaba elikhawulezayo lokutshintsha ukusebenza.
Ukukha, ukuzalisa, ukugcinwa okwethutyana, iimpahla kumntu.
Unikezelo lwamandla aphantsi, ludla amandla amancinci.
Ukuqhuba amandla ngamaxesha angama-3-4 kune-AS / RS.
④Uyilo, uvavanyo kunye neWaranti
Uyilo lwasimahla lunokubonelelwa ngolu lwazi lulandelayo.
Indawo yokugcina impahla Ubude____mm ​​x Ububanzi____mm ​​x Ubude obucacileyo___mm.
Indawo yocango lweWarehouse yokulayisha kunye nokothula iimpahla.
Imigqomo, iibhokisi Ubude____mm ​​x Ububanzi____mm ​​x Ubude___mm ​​x Ubunzima_____kg.
Ubushushu beWarehouse_____Iqondo likaCelsius
Ukusebenza kwangaphakathi nokuphumayo: Ubuninzi bemigqomo okanye iibhokisi ngeyure_____.
Iishuttle ezininzi ziya kuvavanywa phambi kokuhanjiswa.Injineli iya kuvavanya yonke inkqubo kwisiza okanye kwi-intanethi.
Iwaranti ngunyaka omnye.Ukuphendula ngokukhawuleza kwiiyure ezingama-24 kumthengi waphesheya.Okokuqala vavanya kwi-intanethi kwaye ulungelelanise, ukuba ayikwazanga kulungiswa kwi-intanethi, injineli iya kuhamba kwaye isombulule iingxaki kwisiza.Iinxalenye zasimahla ezisecaleni ziya kunikezelwa ngexesha lewaranti.
Ngaphambili: Iindlela ezine kwiRadio Shuttle
Okulandelayo: Isikhululo sikanomathotholo
I-Four Way Shuttle, Umhambisi, Qhuba kwi Racking, IShuttle yomntwana, ICarton Live, Asrs Ugcino,